ကျိုက်ထီးရိုးအမှတ်တရ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကျိုက်ထီးရိုးအမှတ်တရ ….
Posted by fatty on Dec 12, 2011 in Photography, Travel | 23 comments
ကျနော်တိူ့မိသားစု ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကိုသွားပြီးဖူးကြပါတယ် ..။
မနက် ၅ နာရီ အငှားကားကလာကြိုပါတယ်။
တယောက်ကို ၃၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရတယ် နေ့ချင်းပြန်ပေါ့။
၄ နာရီခွဲကထဲ ဖုံးဆက်ပြီးနှိုးပေးသေးတယ်။
ကားကတော့ စူပါကပ်စတန်ကားပါ။ ကျနော်တို့ကသုံးယောက်
ရိုက်လို့ရသမျှဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လို့ရသမျှတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျား …..။
ပထမဆုံးပုံလေးကတော့ ဝေါ မှာလက်ဖက်ရည်သောက်ကြရင်း
ကလေးမလေးတယောက် ဗျိုင်းကလေးတွေလာရောင်းလို့ ရိုက်ထားလိုက်တာပါ။
နံပါတ် ၄ ပုံလေးကြိုက်တယ်
U fat ပုံလေးတွေက ဆွဲဆောင်နေ၊ ကိုယ်ကလည်း သိပ်သွားချင်၊ မရောက်နိုင်သေးပါ။
ပုံထဲမှာ လူတွေ တစ်အားစည်နေတယ်နော်။
လေယာဉ်ပေါ် တက်ရမလို ကားစောင့်နေတာလေး သဘောကျတယ်။
ဦးဖက်ရေ ၊စပ်စုပါရစေဦး ။ ဦးဖက်ရေးထားတဲ့ပုံ က နောက် နှစ်ယောက်က ဦးဖက်တို့နဲ့ မသိတဲ့ တစ်စိမ်းနှစ်ယောက်ပုံပေါက်နေတယ် ။ဟုတ်ပါလား ။ နောက် တစ်ယောက်စီ ဈေးနှုံးရေးထားတော့ ဘတ်စ်သဘောလား ။ မသိသူပါမယ် ။ ကားပေါင်းစီး ။ သို့သော် အိမ်အရောက် အကြို အပို့ လုပ်ပေးတယ် ။ ဟုတ်လားဗျ။ အိမ် ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်လဲ။
ဦးဖက်ရေ- ကားကို စုပြုံတိုးတက်နေတဲ့ ပုံမပါလို့ လူနည်းတယ် ထင်နေတာ၊
လူတော်တော်များတာပဲ။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာတောင် အိပ်ကြရတယ်နော်။
လူတွေ တော်တော် များနေတာပဲ.. အေးနေပြီ ထင်တယ်။
လေးဖက်လုပ်တာနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးတောင် သွားချင်လာပြီ
ပုံလေးတွေက အရမ်းအသက်ဝင်တာပဲ ………….
တယောက်ကို ၃၅၀၀၀နဲ့ တစီးကို ၇ ယောက်တင်ပါတယ် မပြည့်လဲထွက်ပါတယ်။ The Voice
ထဲမှာကြော်ငြာပါလို့ ဖုံးဆက်ပြီးချိတ်လိုက်တာပါ။ ကင်ပွန်းစခန်းကို ၅နာရီအရောက်ပြန်ဆင်းရပါတယ်။
၈ နာရီခွဲလောက်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးပို့တဲ့ကားပါဘဲ။
ဆရာ ဒိုင်းမွန်းကီးရေ သတိရတယ်ဗျာ ဆရာသာဆိုရင် ဘယ်လောက်ပုံကောင်းတွေထွက်လိုက်မလဲပေါ့။
မဒမ်က ပုတီးမစိပ်ဘဲ သူ့ပိုစ်အတွက်ဘဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတာဘဲဆိုလို့ အမြန်အမြန်သုတ်ခဲ့ရတယ် ..။
Can I know the contact number and company name please? And do you recommend this service? Any pros and cons? Thanks.
ဦးဖက်တီး အား အားကျပါ၏
သွားဖြစ်ဖို့ ကား ကြိုးစားရပါဦးမည် ။
Dear TTCG, the company is HARMONY , and you are requested to refer the Voice
journal of any current issue. I recommend just for this trip and for long journey i prefer New Motion company in Sangaung tsp.
ကိုပေ နောက်တခေါက်လာလေ အတူသွားကြရအောင် ….။
ချောင်းသာသွားရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ဖာလိုက်သယ်သွားကြတာပေါ့ …။
Thanks U Fatty. If you don’t mind, can I get the contact numbers as well? I am planning to take my parents to Kyite Htee Yoe pagoda. So, it will be just 1 or2days trip.
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားက ညဘက်မှ ပိုအသက်ဝင်လှပ တယ်လို့ထင်ရသလားပဲ..
တောတောင်ခေါင်ခေါင်မှာ လျှပ်စစ်မီး တ၀င်းဝင်းနဲ့မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့်ထင်တယ်.
ဘုရားဖူး ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ လေးဖက်ရေ..
ကျွန်မတော့တခေါက်မှ မေ၇ာက် ဘူးသေးတော့ 
အခု လို ဓာတ်ပုံ ကနေ ဖူးခွင့် ၇တာ သိပ်ကို ၀မ်းသာတာဘဲ။
အခုလို အပင်ပန်းခံ တင်ပေလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
ဒါနဲ့ ကျိုက် ထီးရိုး က ဘယ် အချိန် သွားဖူးလို့လူ ရှင်း၇ှင်းနဲ့၇ာသီဥတု အသာယာဆုံးလဲ ရှင့် ။
အပြင်မှာ မရောက်ဘူးတော့ ဒီကနေပဲ ဘုရားဖူးသွားပါတယ်ဗျာ…
ပိုက်ပိုက်ချိရင်တော့ ရောက်အောင်သွားပြီး တ၀ကြီးဖူးဦးမယ်ဗျာ……
နေ့ချင်းပြန် တစ်ခါသွားဖူးတယ် … မတ်လမှာသွားမိလို့ အရမ်းပင်ပန်းတယ်လို့ ခံစားလိုက်မိလို့ နောက်တစ်ခေါ နေ့ခြင်းပြန်ဆိုရင် မသွားရဲတော့ဘူး …
တစ်ခါလောက်တော့ လမ်းလျှောက်ပြီးတက်ချင်သေးတယ် … ဘယ်လောက်ကျန်းမာလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်လို့
ဟုတ် ပါ တယ် နေ့ချင်း ပြန် သွား ရ တာ တော် ပင် ပန်း ပါ တယ်။ကျွန် တော် သွား တုန်း က တော့ hiace
စင်း လုံး ငှား သွား တာ နေချင်း ပြန် 250,000 ပေးရ တယ်။ 10 ယောက် လောက် တော့ စီး လို့ရ တာ ပေါ့ ။သီး တင်း ကျွတ် ပြီး သိပ်မ ကြာ ခင် သွား ရင် ခုလောက် တော့ လူမ များဘူး။
ပုံ လေး တွေ အား လုံး လှ ပါ တယ်။
နေ့ချင်းပြန်ဆိုတော့ ရင်ပြင်တော်ပေါ်ပဲရောက်ခဲ့တယ်ထင်တယ်၊ ကျီးကန်းပါးစပ်တို့ တခြားနေရာတွေ မရောက်ဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်။
dear TTCG, hot line No. is 09 8629773.
လူရှင်းရှင်းဖူးချင်ရင်တော့ ရုံးပိတ်ရက်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေရှောင်ပြီးကြားရက်သွားပါခင်ဗျား ..။
နေ့ချင်းပြန်အနေနဲ့တောင်ပေါ်မှာ အချိန်တွေအများကြီးရပါတယ် ကျီးကန်းပါးစပ်တို့ဘာတို့သွားမယ်ဆိုရနိုင်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ ၄ နာရီလောက်အချိန်ရပါတယ် ..။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို တနှစ်ပတ်လုံးသွားရောက်ဖူးမြှော်လို့ရနေပါပြီ ။ မိုးတွင်းကာလလေးလဆိုရင်တော့ တောင်တက်ကား အတက်အဆင်းရှိတဲ့အချိန်ကိုတော့စောင့်ရပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်မရာက်ခင်သွားရင်တော့ လူရှင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဘုရားဖူး ဆွမ်းကပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားပွဲကာလ ရှစ်လဆိုရင် လပြည့်နေ့တွေ ၊ ခရစ်စမတ် ၊ နယူးရီးယား ၊ သောကြာ ၊ စနေ နေ့တွေမှာ တောင်ပေါ်တက်တဲ့လူများတတ်ပါတယ် ။ လူများတော့ တမျိုးပျော်စရာကောင်းပေမယ့် ဆွမ်းတော်ကပ်ချိန် ဘုရားဖူးချိန်တွေမှာ အနှောင့်အယှက် ရှိနိုင်ပါတယ် ။
ပြီးတော့ ကျိုက်ထီးရိုးကိုဘုရားလာဖူးမယ်ဆိုရင် တောင်ပေါ်မှာတစ်ညလောက်တော့အိပ်စေချင်ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားရဲ့ ညရှုခင်းကိုခံစားစေချင်လို့ပါ ။ ဦးဖက်လို ကားခတစ်ယောက် ၃၅၀၀၀ အကုန်မခံတော့ပဲ အဝေးပြေးဝင်းထဲကနေ ကားစီးရင် တစ်ယောက်ကို ၃၅၀၀ နဲ့ ကင်မွန်းစခန်း ကိုရောက်ပါတယ် ။ အသွားအပြန် တစ်ယောက် ၇၀၀၀ ပေါ့ ။ စီးရတာ မပင်ပန်းပဲ သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ် ။
ပိုတဲ့ငွေကို တောင်ပေါ်မှာ တည်းဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်ရင် အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတာပေါ့ ။ အနီးနားမှာရှိတဲ့ မုဆိုးတောင် ကျောက်ဆီယို နဲ့ ကျောက်ထပ်ကြီးလိုနေရာတွေကိုပါသွားနိုင်ပါ ။ နေ့ချင်းပြန်ဆို ပင်ပန်းတာပေါ့ ။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ရင်ပြင်ထောင့်တနေရာမှာ ကျောက်ရေကန်အသေးလေး တခုရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရားဖူးလာသူအများ ငွေစက္ကူတွေစိမ်ပြီး ဆုတောင်းကြတယ်။ ထူးခြားချက်က ဆုတောင်းပြည်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံလိပ်လာတာလား ဖောင်းလာတာလား သေချာမမှတ် မိတော့ဘူး ဖြစ်တယ်။ ရေစိမ်တဲ့ ငွေစက္ကူတိုင်း မဖြစ်တာတော့ သိတယ်။ ကျနော် ငွေစက္ကူ သုံးချက်နဲ့ သုံးခုဆုတောင်းတာ သုံးခုစလုံး ထူးခြားချက် ပြတယ်။ တုံ့ပြန်ပုံ အတိုင်းအတာခြင်း မတူကြဘူး။ ယုံကြည်မှုအရဆိုရင်တော့ ပိုသိသာရင် ပိုဆုတောင်းပြည်မယ်။ ဆုတောင်းချက်တွေက ရေရှည်အချက်တွေ ဖြစ်လို့ မှန်မမှန် မသိနိုင်သေးဘူး။ သို့သော် မဖြစ်နိုင်မှားသွားခဲ့ပြီလို့ အခုအချိန်အထိ ပြောမရသေးဘူး။ အဲဒီကျောက်ရေကန်လေးအကြောင်း သိရင်ပြောပြပါ ဦးပေါက်။။။။။။။။
မှားလို့ ဦးဖက်လို့ ရေးတာ။ ရွာထဲက လူဆိုးကြီးနှစ်ဦး နာမည် ခဏခဏ မှားတယ်။။
သွားမယ် သွားမယ် နဲ့ မရောက်ဖြစ်သော ကျိုက်ထီးရိုး ကို
ကိုဖက်တီးက သွားပြလိုက်တော့ ပိုသွားချင်နေပြီဗျို့။
ပိတ်ရက် ဆို တော့ ရင်ပြင်မှာတောင် လူတွေ ပြည့်နေတယ်
ပုံလေးတွေ လှ တယ်
ဦးဖက် ဘာဆုတွေ တောင်းခဲ့လဲ
၀န်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးတဲ့ ကားတွေ ပေါ်လာတယ် ဆိုတာ ၀မ်းသာစရာပဲ
ကျွန်တော် ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးခရီးစဉ် တွေထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တောင်ခြေကနေ တောင်ပေါ်ထိ လမ်းလျှောက်တက်ခဲ့တာကို အခုထိ မမေ့နိုင်သေးဘူး ၊ ဒီ အချိန် ပြန်တက်နိုင်ဘို့တော့ မလွယ်တော့ဘူး